ဖုန်း ကို window7ပုံစံလိုသုံးချင်သူတွေ အတွက်
Posted by khaing toe at 10:32 PM0comments Read more
ငပိန် သင်္ကြန် ဂိမ်း
ဆော့ ချင်တဲ့ တူတွေ ဒေါင်းလို့ ၇တယ်နော် https://m.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fy77do6843yh7lgs%2Fcom.totalgameplay.ngapaintg-1.apk&h=JAQFHlHM9&s=1&enc=AZMrZRXx-I_pGB_uuKac3J8OLjWXqm15hFnH8YG4jlM1mz4Y1cVtOk2NtgDC88VAHZnNCkG03Ct2CjMTctebcV7TQKJjIh5w6LtNsSxsZwxeqA (4 photos)
Posted by khaing toe at 10:28 PM0comments Read more
ဖုန်းထဲက Mp4 တွေကို Mp3 အဖြစ်ပြောင်းလည်းပေးနိုင်တဲ့ဆော့ ဝဲလ်လေး
ဖုန်းထဲက Mp4 တွေကို Mp3 အဖြစ်ပြောင်းလည်းပေးနိုင်တဲ့ဆော့ ဝဲလ်လေးပါ ကြိုက်၇င်တော့ ဒေါင်းပေါ့မကြိုက် ၇င်လည်းlike ပေါ့https://www.dropbox.com/s/kwxw9lm6i0eyp4h/com.goseet.VidTrimPro-1.apk
Posted by khaing toe at 10:25 PM0comments Read more
★★Freehunter Lost Islands HD Apk + Data v1.2.6 Full version New Update ★★
ကျွန်းပေါ်မှာလူဆိုးတွေကိုလိုက်လံနှိမ်နှင်းရတဲ့ full action ဂိမ်းလေးပါ။PS2 ဂိမ်းကြီးတွေကိုမိမိဖုန်းမှာ
ကစားချင်သူတွေအတွက် Apk + Data ပေါင်းမှဖိုင်ဆိုဒ် 60Mb ပဲရှိပါတယ်။Android: 2.3 နှင့်အထက်က
စပြီးကစားနိုင်ပါတယ်။အထဲက OBB ဖိုင်လေးကိုတော့ Sdcard\_android\_obb ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်
Play asabounty hunter in this lost world accomplishing 16 missions, full of action, on foot, drivingabuggy or flying an airship.*
Explore6different islands. Ancient ruins and abandoned corporation facilities coexisting inalost sci fi world located inadistant planet.
Game: Freehunter Lost Islands HD APK ||
Version: 1.2.6 ||
Size: 60 MB ||
Required android: 2.3 and up||
Market Link: https://play.google.com/com.ikkyosoft.Freehunter ||
Posted by khaing toe at 8:39 PM0comments Read more
Posted by khaing toe at 7:18 PM0comments Read more
Friday, February 14, 2014 ★★ Aiseesoft Blu-ray Player 6.2.36 + Patch (Full Version) ★★
မိမိကွန်ပြူတာအတွက်ပလွယ်ကူဆုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Aiseesoft Blu-ray Player လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။media file sဖြစ်တဲ့ MPG, MPEG, VOB, MP4, RMVB, MKV, AVI, FLV, SWF, MOD, TOD, AAC, AC3, MP3, OGG, WAV, WMA, နှင့် Blu-ray discs နဲ့ Blu-ray ISO image files ကအစ
အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှု့နှိုင်တဲ့ 1080p full HD Player တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။Full ဖြစ်စေဖို့
အတွက် Patch ဖိုင်လေးကိုထည့်သါင်းပေးထားပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ် 36Mb ရှိပါတယ်။၀င်းဒိုးအားလုံးအသုံးပြု
Posted by khaing toe at 7:08 AM0comments Read more
သည်နေ့တင်မဲ့ ပို့စ်လေးကတော့ ဘလော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအတွက် မိမိတို့ ဘလော့ကိုနောက်ခံ ပုံစံဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ဖို့ နောက်ခံ ပုံအမျိုးမျိုး ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး ရယူနိုင်တဲ့ ဆိုဒ်လေးကို
လမ်းညွှန်ပေးပါ့မယ်... ကုဒ်ယူနည်းလေးနဲ့တစ်ကွ ရှင်းပြထားပါတယ်...
ပထမဆုံး သည်ကနေ သွားလိုက်ပါနော်..
ရောက်တာနဲ့ အပေါ်ကပုံပြထားသလို background ဆိုတာကို ကလစ်ပါ။ ဒါဆို ပုံတွေ ရှိတဲ့နေရာကနေ
မိမိ နှစ်သက်တဲ့ ပုံကိုရှာလိုက်ပါ။ တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့.. အဲပုံပေါ် ကလစ်လိုက်ပါ။
အဲခါမှာ အဲပုံလေးပေါ်လာမယ် အောက်နားမှာ ဆွဲချကြည့်လိုက်ပါ....
သည်လိုလေးတွေ့မယ်.. အပေါ်ဇယားကွက်ထဲက ကုဒ်တွေကိုဘဲ ကော်ပီ ကူးယူလိုက်ပါ။
(၂) ဘလော့ကာ layout ကိုကလစ်ပါ
(၃) Addagadget ကိုကလစ်ပါ
ကုဒ်တွေကို ထည့် ပြီး save ပေးလိုက်ပါ...
ဒါဆို မိမိ ဘလော့နောက်ခံလေး လှပစွာ တွေ့ ရပါ့မယ်..
မလိုအပ်တော့ပါက ထည့်ထားတဲ့ နေရာကိ်ု edit ကလစ်ပြီး remove ပေးလိုက်ယုံပါဘဲ။
Posted by khaing toe at 6:54 AM0comments Read more
တရုပ်ဖုန်းပေါင်းများစွာကို Root ဖောက်ပေးနိုင်တဲ့ - VRoot v1.7.5.5379 (Update - Feb-14)
Root Tools တွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာ VRoot ကတော့ နာမည်ကြီးပြီး လူသုံးအများဆုံး Root Tool တစ်ခုပါ ဘဲ။ Phone Service သမားတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software တစ်မျိုးပါ။ အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ကူ လို့ သာမန် User တွေပါ မိမိအိမ်မှာ ကိုယ်တိုင် Root ဖောက်နိုင်ပါတယ်။ Click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ Root Access ဖြစ်သွားမှာပါ။ Support လုပ်နိုင်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေကလည်းအများကြီးပါ။ ခြုံငုံပြီးပြောရ မယ်ဆိုရင် တရုပ်ဖုန်းအားလုံးလိုလိုကို Root ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
Posted by khaing toe at 6:49 AM0comments Read more
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်အာရှသားပါ.. ကျွန်တော့
Blog ထဲလည်း Post တွေမတင်ဖြစ်တာ အတော်တောင်
ကြာသွားပီထင်တယ်.. ထုံးစံအတိုင်းပေ့ါဗျာျြမန်မာနိုင်ငံရဲ့
Connection ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်.. :P အခုတစ်ခါ
ပြောချင်တာလေးက ကျွန်တော့ဆရာ ဦးရဲကြီးဆိုင်မှာထိုင်
အသိ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ Facebook Account ,
G-mail Account တွေ မ၀င်တာကြာသွားလို့ Password
တွေမမှတ်မိတော့လို့ဆိုပီး ကျွန်တော့ကိုလာခေါ်တော့ ကျွန်တော်
လည်း အားချင်းဆိုသလို Application တစ်ခုကို ချက်ချင်း လိုင်း
မကောင်းတဲ့ကြားထဲက နေဒေါင်းပီး လိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။
Application ရဲ့ နာမည်ကတော့ Facebook Password Dump
ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နာမည်အရ FB Pas Dum ဆိုပေမယ့်လည်း
တစ်ကယ်တမ်းမှာ G-mail Password တွေနဲ့ Browser တွေ
မှာ Remember Password လုပ်ထားသမျှကို Recover လုပ်
နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်မယ်လို့စိတ်ကူးဒထားတဲ့ Application
တွေထဲမှာမ အကောင်းဆုံးလို့ဆိုလည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကဲ စကား
ပီးသွားရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း Install လုပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ပါပုံအတိုင်း သင့်ရဲ့ Desktop မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
ပီးသွားရင်တော့ ၄င်းထဲမှာ Run လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ....သင့် Browser
ထဲမှာမှတ်ထားသမျှ Password အားလုံးကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
Posted by khaing toe at 3:24 AM0comments Read more
Labels: Facebook, Softwares